MBP - မိုက်ခရိုဘလော့ဂ်ရေးဆွဲသူနှင့် protocol | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဇွန်လ 13, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အချင်းလူတို့၊ အချိန်ကာလကိုအကြားတွင်ပြန်ဖတ်ခဲ့ကြပေမည် ရောဘတ် Scoble နှင့်တွစ်တာ။ Scoble သည်တွစ်တာနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအခြေအနေကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်။ အချို့သောရှေးရှေးများသည်မိုက်ခရိုဘလော့ဂ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူစီးပွားရေးပုံစံတစ်ခုကိုပြောနေကြသည် လူကြိုက်များအသုံးပြုသူများသည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ပေးဆောင်သည်.
တကယ်တော့ပိုကောင်းတဲ့အဆိုပြုချက်ကိုငါတင်ချင်တယ်၊ ဒါကအသားတင်ရဲ့ micro-blogging platform တွေအတွက်ပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Tumblr သည်, ဂျာစီ, တွစ်တာPownce ငရုတ်သီးစိမ်း, နင်, Plurk, QikMicro-Blogging Protocol ကိုဆုံးဖြတ်ရန်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးသည် Micro-Blogging Provider များဖြစ်လာနိုင်သည်။
မိုဘိုင်း၊ ဗီဒီယို၊ အသံ၊ လင့်များ၊ ပူးတွဲဖိုင်များ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများအားလုံးကိုစင်ကြယ်သော protocol တစ်ခုတွင်ပါနိုင်သည်။ 'လိုက်' နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီသည်သူတို့၏အသုံးပြုသူကိရိယာများနှင့်မျက်နှာပြင်များမှတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူနိုင်သော်လည်းအချို့သူများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကျော်ကြားမှုသည်စတင်ပျံ့နှံ့သွားနိုင်သည်။ ပံ့ပိုးသူတိုင်းသည်မတူညီသောမီဒီယာများကိုပင်ထောက်ပံ့ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအချိန်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီးသုံးစွဲသူများသည်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သော client application များသို့ဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။
၎င်းသည်ချဉ်းကပ်မှုအသစ်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသည်အီးမေးလ်ဖြင့်ပြုသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်စာရင်းရှိမည်သူမဆိုကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဒီတော့စက်မှုလုပ်ငန်းမှာ Micro-Blogging Protocol အတွက်အချိန်ရှိပြီ။ ပြီးတော့ Micro-Blogging Provider ပေးသူတွေကိုခေါ်ကြည့်ရအောင်။ စားသုံးသူများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ကြပါစို့။
13:2008 pm မှာဇွန် 11, 59
ဇွန် 13, 2008 မှာ 2: 45 pm တွင်
ဇွန် 13, 2008 မှာ 6: 37 pm တွင်
မိုက်ခရိုဘလော့ဂ်ကိုပေါင်းစပ်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုအဖြစ်အသုံးပြုသင့်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းကိုအမြောက်အများဖြင့်စာတိုပေးပို့ခြင်း (သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုမွမ်းမံရန်)၊ လူမှုကွန်ယက်များ (FaceBook status function ကဲ့သို့) status bar နှင့်အီးမေးလ်လက်မှတ်များအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
16:2008 pm မှာဇွန် 1, 46
ကုမ္ပဏီကြီးအများအပြားထဲမှအနည်းဆုံးလူတစ် ဦး စီမှလွဲပြီးအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်လာရန်ခေါင်းဆောင်မှုကိုယူရန်လိုသည်မှာအလွန်ကောင်းသောအကြံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါအဆိုးမြင်လာပြီဖြစ်ပေမယ့်ဖြစ်ပျက်နိုင်မယ့်အရာများစွာကိုငါမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာကိုမတွေ့ခဲ့ဘူး၊လူတိုင်းကလိုက်နာ, ဒါမှမဟုတ်အခြား။ " အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်လို့ဝမ်းနည်းပါတယ်၊
စကားမစပ်, သင်သတိထားမိမယ်မသေချာပေမယ့်ငါနောက်ဆုံးတော့ switched ငါ့ဘလော့ဂ် တစ်နှစ်နီးပါးကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်ပြီးနောက် WordPress သို့ \_ t ငါက စောင့်ဆိုင်းနေ အချိန်ကုန် (နှင့်လှုံ့ဆျောမှု) သည်တန်ဖိုးရှိသောကြောင့် ပို၍ အခက်အခဲဖြစ်လာသည့်ငါ့ဆော့ဝဲအဟောင်းမှနောက်ဆုံးတွင်ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ ယခုငါသင်၏ blog နှင့်အခြားသူများအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရုံထက်ပိုလုပ်နိုင်; ငါတကယ်နောက်တဖန်ဘလော့ဂ်စတင်နိုင်သည်!
FYI, ခင်ဗျားအခုငါတက်ကြွစွာလိုက်နာနေတဲ့ဘလော့ (၃) ခုထဲကတစ်ခုပါ။ ငါနောက်ထပ် blogroll အမျိုးအစားထည့်သွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ငါသာအချိန်ရှိခဲ့လျှင်ဘလော့ဂ်များငါလိုက်နာပါလိမ့်မယ်!ထွက်ရှိအခြားအကြီးအဘလော့ဂ်များအဘို့ "။ '-)
16:2008 pm မှာဇွန် 8, 42
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ငါဘလော့ဂ်တွေဖတ်တာ (ငါကြိုက်သလောက်) လုပ်သင့်သလောက်မလုပ်ခဲ့ဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံအလုပ်လမ်းအတွက်ရရှိသွားတဲ့;) ။
ငါထောက်ခံမှုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ဘလော့စ်fer, Mike ကိုပြန်ကြိုဆိုပါတယ်!
ဇွန် 16, 2008 မှာ 4: 13 pm တွင်
ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးငါမည်သူမဆိုဘလော့ဂ်များစွာဖတ်ရှုဖို့အချိန်ရှိပုံကိုမသိရပါဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာမှမလုပ်မိတဲ့အချိန်ကိုသွားခွင့်ပြုတဲ့အခါအဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ။ ထိုအခါငါကိုယ့်ကိုကိုယ် "စကားပြောဆိုမှု" ("ဆွေးနွေးငြင်းခုံ" ကိုဖတ်ပါ) သို့စုပ်ယူခွင့်ပြုခဲ့ပါလျှင်ဒါဟာတကယ့်အချိန်ကုန်ဖြစ်လာသည့်အခါပါပဲ။ အမြတ်အစွန်းရထားသောအလုပ်အကိုင်ရှိသူများသည်၎င်းအတွက်အချိန်ကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
သို့သော်ကျွန်ုပ်ဆက်လက်ဖတ်ရှုရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ၊ ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသောအကြောင်းအရာများအတွက်၊ သင့်ဘလော့ဂ်အများစုထက်“ ဆူညံမှု” အချိုးထက်စာလျှင်“ အချက်ပြခြင်း” အပေါ်များစွာမူတည်ပါသည်။ ကူဒို။